भगतालु सग मागेर पशुपतिमा १४१ किलो सुनको जलप लगाइने ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भगतालु सग मागेर पशुपतिमा १४१ किलो सुनको जलप लगाइने !
भगतालु सग मागेर पशुपतिमा १४१ किलो सुनको जलप लगाइने ! धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पशुपतिको गजुरजस्तै शिवलिंगको पिठिकासमेत अब भक्तजनबाट सहयोग मागेर सुनले सिंगारिने भएको छ । तर, पिठिकामा भने सुनको जलपमात्र हुनेछ ।पिठिकामा हाल चाँदीको आवरणयुक्त जलहरी मात्रै छ । त्यसलाई हटाएर सुनको जलहरी बनाउन लागिएको हो ।
पशुपतिनाथका शिवलिंग अमूल्य धरोहरका रूपमा रहेकाले त्यसको संरक्षण र संवद्र्धनका निम्ति सुनको जलप लगाउने निर्णय गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।
यसका लागि १ सय ४१ किलो सुन लाग्ने अनुमान कोषको छ । भक्तजनको सहभागितामा हुने जलहरी निर्माणमा २४ क्यारेटको सुन प्रयोग गर्ने काेषाकाे याेजना छ ।भक्तजनसँग सहयोग आह्वान
सुनको जलहरी निर्माण अभियानका लागि गोप्य दानको व्यवस्था पनि कोषले मिलाएको छ । दानबारे जानकारी दिन अनिच्छा गर्न भक्तजनका लागि कोषले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरको प्रांगणभित्र र बाहिर १/१ वटा दानपात्रको व्यवस्था मिलाएको कोषले जनाएको छ ।
यसरी सहयोग गर्ने दाताको नाम कोषले आफ्नो स्मारिकमा प्रकाशित गर्ने जनाएको छ ।